२ नं. प्रदेशमा एक दिन सार्वजनि विदा, पाँच दिन विद्यालय बन्द - Everest Dainik - News from Nepal
२ नं. प्रदेशमा एक दिन सार्वजनि विदा, पाँच दिन विद्यालय बन्द
काठमाडौं, भदौ २६ । २ नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते हुने स्थानीय चुनावको दिन सरकारले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २ नम्बर प्रदेशमा चुनाबको दिन ( असोज २ गते) एक दिन सार्वजनिक विदा दिने निणर्य गरेको हो । शिक्षण संस्थामा पाँच दिनसम्म विदा हुने छ । विद्यालयहरुमा भदौ ३० गतेदेखि असोज ३ गतेसम्म पाँच दिन विदा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
अधिकांश मतदान केन्द्र विद्यालयहरुमा राखिएकाले ति विद्यालयहरुमा सार्वजनिक विदा दिन यसअघि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।